Mahadum Fudan Shanghai Cancer Center - Shenzhen Doneax Science and Technology CO., LTD
Mahadum Fudan Shanghai Cancer Center
Mahadum Fudan University Shanghai Cancer Center (FUSCC) bụ otu n'ime ngalaba njikwa mmefu ego n'okpuru National Health Commission. Thelọ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ na-arụkọ ọrụ ọnụ nke Ministri Mmụta, National Health Commission na gọọmentị obodo Shanghai. E guzobere ya na Machị 1, 1931. FUSCC amalitela ugbu a ka ọ bụrụ ụlọ akwụkwọ ọkwa-A na-arụ ọrụ na njikọta nke usoro ọgwụgwọ, agụmakwụkwọ ahụike, nyocha oncologic na mgbochi kansa.
Na Disemba 4, 2018, Healthlọ Ọrụ Ahụ Ike Mba kwupụtara ya dị ka nke mbụ nke nyocha ọtụtụ ọnya na ọgwụgwọ ụlọ ọgwụ.
Ka ọ na-erule ngwụsị nke afọ 2019, ụlọ ọgwụ emegheela ihe karịrị ihe ndina 2,000. FUSCC nwere ngalaba iri abụọ na isii: Ngalaba Isi na Ọwa Ahụ, Ngalaba n'gerywa Ahụ, Ngalaba Na-awa Ahụ Thoracic, Ngalaba Ọrịa Gastric, Ngalaba Rectwa Ahụ, Ngalaba Urology, Ngalaba Ọrịa Pancreatic, Ngalaba Ọwa Ahụhụ, Ngalaba Neurosurgery, Ngalaba Ọkpụkpụ & gerywa Ahụ Ahụ, Ngalaba Gynecologic Oncology, Ngalaba Ahụike Oncology, Radiotherapy Center, Ngalaba TCM-WM Oncology Integrated, Ngalaba Ngwọta Na-ahụ Anya, Ngalaba Anesthesiology, Ngalaba Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọgwụ, Ngalaba Pathology, Ngalaba Na-ere Ọgwụ, Ngalaba Clinical Laboratories, Ngalaba Endoscopy, Ngalaba Ultrasound Diagnosis, Ngalaba Diagnostic Radiology, Ngalaba Nuklia Nuklia, Ngalaba Cardio- Ọrụ Pulmonary, na Ngalaba Clinical Nutriology.
Na FUSCC, oncology na pathology bu ndi anabatara dika ndi isi nkuzi ulo akwukwo site n’aka ndi Ministry nke Education; oncology, pathology and TCM-WM Integrated Medicine, dị ka usoro nlekọta ahụike mba, n'otu n'otu; na oncology ara, rediotherapy, pathology, dị ka ịdọ aka ná ntị ahụike dị n'okpuru Healthlọ Ọrụ Ahụ Ike Mba. A na-akpọ ndị otu na-ahụ maka nyocha ọrịa kansa na ọrịa kansa dị ka ndị otu ọhụụ site n'aka Ministry of Education. Na obodo, enyere FUSCC ikike ịnwe ụlọ ọgwụ na-agwọ ọrịa atọ na oncology, radiotherapy na ara oncology, yana ọkachasị ịnweta ụlọ ọgwụ ọgwụ abụọ na-ebute ụzọ na ọrịa ọjọọ na ịwa ahụ thoracic. A na-ahụkarị usoro ọgwụgwọ ya dị ka ọzụzụ ahụike obodo. ya oncology, daa ọrịa, rediology, gynecologic oncology na thoracic oncology, na-ise ọchịchị isi pụrụ iche ọzụzụ, nke na-mmekọ na Shanghai Pathology Quality Control Center, Radiotherapy Quality Control Center, Cancer Chemotherapy Quality Control Center na Shanghai Anticancer Association.